Wargeyska La repubblica oo qorey Soomaaliya: xorriyadda saxaafadda marka la eego doorashooyinka waa halis | Somalisan.com
Home Afsomali Wargeyska La repubblica oo qorey Soomaaliya: xorriyadda saxaafadda marka la eego doorashooyinka...
Wargeyska La repubblica oo qorey Soomaaliya: xorriyadda saxaafadda marka la eego doorashooyinka waa halis
Dhibaatooyinka bina-aadamnimada iyo amniga ayaa lagu soo daray kuwa xiriirka la leh guddoomiyaasha dowlad goboleedyada xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya. Waqtiyada qaarkood xiriir aad u adag sida kuwa hadda wajahaya Farmaajo oo ka horyimid Axmed Maxamed Islaam, oo loo yaqaan Madoobe, ayaa loo doortay markii seddexaad inuu madax u noqdo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee jubba markaasoo uu jabiyey sharciga laakiin uu taageero ka helay dowlada deriska la ah ee Kenya: khilaaf sababay Farmaajo in loo diro 700 oo ciidan qaran ah si ay uga hortagaan doorashada Madoobe, oo uu ugu yeeray meel fog, oo leh halista xukunka xukunka dagaal sokeeye iyo iska hor imaad lala galo Kenya, taasoo ka careysiisay bulshada caalamka.
Xaqiiqdii, dulqaadashada xorriyadda hadalka ayaa kordhay iyadoo la xiray dhowr weriye oo lagu eedeeyey inay dhaleeceeyeen dowladda
Raiisel wasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre
Tifatiraha warbaahinta Goobjoog Cabdicasiis Axmed Gurbiye ayaa saddex maalmood ku qaatay xabsiga dhexe ee Muqdisho maqaalo uu ku dhalleeceynayo sida ay dowladdu wax uga qabaneyso faafitaanka cudurka ‘Covid-19’ kaas oo laga wada hadli doono waqti dhow.
Arrin kale ayaa ah weriyaha Voice Of America Mukhtaar Maxamed Atosh, oo lagu xiray magaalada Baydhaba kadib markii uu faafiyay wararka sheegaya in askar ka tirsan ciidamada qaranka ay gaari bas ah ku weerareen wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Baydhaba iyagoo watay labo haween ah kuna kufsaday. . Mid ka mid ah labada, oo ah arday 14-jir ah, ayaa ku dhintey oo baaritaanka lagu sameeyay wuxuu go’aamiyay in lagu muteystay kufsi iyo jirdil. Eedaynta ay u soo gudbiyeen suxufiga booliiska baydhabo ayaa ah “in ay soo sheegaan shilalka halista ah ee shacabka iyada oo aan ogolaansho laga haysan dowlada”.
Dacwada afaraad ayaa ah tan weriyaha kale ee VOA, Harun Maruf, oo ku hanjabtay inay ka warbixineyso dambiyo ka dhan ah amniga qaranka hay’adda basaasinta ee NISA, oo ah hay’adda basaasnimada ee Soomaaliya, maxaa yeelay lagu eedeeyay inay xiriir la leedahay Al-shabaab. Harun Maruf wuxuu dhowaan daabacay buug qoto dheer oo cinwaankiisu yahay “Inside Al Shabab”. Xitaa Safiirka Mareykanka ee Muqdisho Donald Yukio Yamamoto wuxuu u dhacay si uu u arko, wuxuu Harun Maruf ku tilmaamay mid ka mid ah suxufiyiinta ugu saameynta badan, wuxuu intaas ku daray “cabsi-gelinta NISA waxay dhaawaceysaa xorriyadda saxaafadda iyo saxaafadda madaxa-bannaan ee asaas u ah aasaasidda. mas’uuliyadda xukunka dimoqraadiga ah ee Soomaaliya “.
Nicolas Berlanga Martinez, danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya, wuxuu sidoo kale soo farageliyey xaaladdan xasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya, oo, isla markii uu la kulmay Raiisul Wasaare Xasan Khaire, farriinta ku baahiyey bartiisa twitterka. Wuxuu lahadlay masuuliyiinta Soomaalida: “Cambaaraynta waa qeyb ka mid ah geedi socodka dimoqraadiyada. Xaddidaadda xorriyadda hadalka muu noqon kartaa masiibo kale. .
Sikastaba, wicitaanada Safiirada Mareykanka iyo Midowga Yurub uma muuqdaan inay cabsi gelinayaan Raiisel Wasaare Xasan Khayre.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fawzia Abikar
Intii uu Farmaajo ka baqay cudurka faafa, wuxuu iftiimiyay xabsiyada isagoo cafis u fidiyay 148 maxbuus, booliska siyaasaduna waxay xireen laba sarkaal oo ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka 6dii Abriil. Labada ayaa horay loogu keenay garsooraha seddex jeer eedda, si kastaba ha noqotee, kaasoo xeer ilaaliyaha guud uusan wali ku guuleysan inuu weydiisto dib u dhigis joogto ah. Shalay, dib u dhigis dheeri ah ayaa la amray in la gaaro Abriil 30-keeda. Sheekadu waxay umuuqataa inay kuxirantahay khilaafkii uu wasiirka caafimaadka Fawzia Abikar u dirtay shirkada turkiga ee Yardimeli kaas oo maamusha cisbitaalka isla magacaas ee muqdisho. Tani waxay ahayd mowduuc kale oo la soo dersay weriyaha Goobjoog Cabdicasiis Axmed Gurbiye sidaasna ku dhammaaday aragtida dawladda. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Caafimaadka, waxqabadka Yardimeli wuxuu ka dhigan yahay xad-gudub sharciga ah, isaga oo xaq u leh inuu qaado tallaabo sharciyeed oo munaasib ah si looga hor tago gargaarka bini-aadamnimada iyo caawinta walaalnimada Turkiga ee loo oggolaanayo inay raacdo danaha shaqsiyadeed.
Waxaa jira kaliya sideed bilood oo ay tahay in la galo doorashooyinka iyadoo la raadinayo jagooyinka ugu wanaagsan ee dagaalka siyaasadeed, gags ayaa la saaray. Maaha goobta ugu wanaagsan ee demoqraadiyadooda caafimaad
Previous articleGovernment develops Education Sector COVID-19 Preparedness and Response Plan
Next articleFull VIDEO farmaajo iyo kulan on line ah
Dhageyso Afhayeenka Alshabaab oo ka hadlay arimo ay ka mid yihiin waxbashada
full VIDEO Saxiixida Madaxweynaha ee Sharciga Isgaarsiinta Dalka
Garsoore mareykan ah oo Diiday in uu dhaqan galo amarkii Trump uu ku soo...